(မိုးမခ) မေ ၁၈၊ ၂၀၁၇
Table များနဲ့ အလုပ်လုပ်ခြင်း
Table ဆိုတာကတော့ အချက်အလက်တွေကို ကြည့်ကောင်းအောင် ရှင်းပြလွယ်အောင် နားလည်လွယ်အောင် စုစည်းထားတဲ့ ဇယားကွက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သာမန် စာစီ စာရိုက် အပိုက်ခွဲ စာပိုဒ်တွေနဲ့ မိမိဆောင်းပါးကို ဖော်မက်ချတာအပြင် Table တွေနဲ့လည်း စာစီ စာရိုက်ကြတာတွေ လုပ်ပါတယ်။ Indent တွေ ဖော်မက်ချပြီး စာတွေ နေရာချထားတာထက် ဇယားကွက်တွေထဲမှာ စာတွေ စီရ ရိုက်ရတာက ပိုပြီး လွယ်ကူ လျင်မြန်ပါတယ်။
To insertatable: တေဘယ်ကို ထည့်သွင်းခြင်း
Table မီးနူးကို ဆွဲချပြီးတော့ Insert Table ကို နှိပ်ပါ။
အဲသည်မှာ Table အတွက် ဒေါင်လိုက်အကွက် အလျားလိုက်အကွက် ဘယ်လောက်ထည့်မလဲဆိုတာ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
မောက်စ်ကို ဖိဆွဲပြီးတော့ ကိုယ်အလိုရှိရာ ဇယားအကွက်တွေကို ရွေးချယ်ပါ။
ပြီးတော့ မောက်စ်ကို ကလစ်ပြီး လွှတ်လိုက်ရင် မိမိ ကာဆာချထားတဲ့နေရာမှာ ဇယားကွက် ပေါ်လာပါမယ်။
ဇယားကွက်တခုလုံးကို ဖျက်ချင်ရင် ဇယားပေါ်ကို မောက်စ်ကိုထား၊ Right Click ကိုနှိပ်ပါ။ အဲသည်မှာ - “Delete Table” command ကို ရွေးလိုက်ရုံပါပဲ။
To add an additional row: ကန့်လန့်ဖြတ်အတန်း (ROW) ထပ်ထည့်မယ် ဆိုရင် -
လိုချင်တဲ့ row ထည့်ချင်တဲ့ကပ်ရက် row ကို ရွေးချယ်ပါ။ မောက်စ်ကို ရိုက်ကလစ် နှိပ်ပါ။ ပြီးတော့
Insert row above or Insert row below တခုခုကို ရွေးချယ်ပါ။
အောက်မှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း ROW အသစ်တခု ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
To add an additional column: အပေါ်အောက်အတန်း COLUMN ထည့်မယ်ဆိုရင်
မိမိအလိုရှိရာ ကော်လန်ထည့်ချင်တဲ့ ကပ်ရက် ကော်လန်ကို ရွေးပါ။ ရိုက်ကလစ် နှိပ်ပါ။ ပြီးတော့ Insert column left or Insert column right ကိုရွေးချယ်ပါ။
To deletearow or column: ကော်လန်တွေ ရိုးတွေကို ဖျက်ချင်ရင်
ဖျက်ချင်တဲ့ ကော်လန် သို့မဟုတ် ရိုးကို အရင်ရွေး၊ ရိုက်ကလစ်နှိပ်၊ ပြီးမှ Delete Rom or Delete Column လုပ်ပါ။
Editing table properties - ဇယားကို ဖော်မက်ချခြင်း
table properties ဆိုတာက သူ့ဇယားကွက်တခုချင်းစီ - cell dimensions, alignment, border size, and color တွေ ပြောင်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Cell တွေ အကွက်တွေကို ပြင်ဆင်ချင်ရင် သူ့ဘော်ဒါလိုင်းတွေကို ရွေးချယ်ပြီး ပြင်လို့ ရပါတယ်။
ဘော်ဒါလိုင်းအပေါ်ကို မောက်စ်ကို နေရာရွှေ့ပါ။ ကာဆာလေးကို မြားနှစ်သွား အဖြစ် ပုံပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ် - double arrow.
ဖိပြီးတော့ ဆွဲလိုက်ရင်တော့ ပြောင်းလို့ရတဲ့ လိုင်းဟာ အပြာရောင် မျဉ်းတံလေးအဖြစ် လိုက်ပါ လာပါတယ်။
မောက်စ်ကို ဖိထားတာကနေ လွှတ်ချလိုက်ရင်တော့ cell အမြင့် ပြောင်းသွားတာကို တွေ့ရပမယ်။
Table Properties ကို Table ပေါ်မှာ မောက်စ်ကို ထား၊ Right Click လုပ်ပြီးတော့၊ ဆလက်လုပ်ပြီးတော့လည်း ရွေျးချယ် ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်နိုင်ပါတယ်။
To modify horizontal cell alignment: ဇယားကွက်တွေကို ဘယ်ညာ အလယ် ညှိခြင်း
ဇယားကွက်အတွင်းက စာသားတွေကို ဘယ်၊ ညာ၊ အလယ်၊ တပြေးညီ ညှိတာတွေ လုပ်လို့ရပါတယ်။ ဒါကို မီနူးဘားပေါ်က four alignment buttons in the shortcut toolbar ကို သုံးပြီး လုပ်ရပါတယ်။
Cell တခု သို့မဟုတ် Cell တွေကို ရွေးချယ်ပါ။
မိမိနှစ်သက်တဲ့ ဘယ်ညာအလယ် ညှိ ခလုပ်ကို ရွေးလျယ်ပါ။ alignment button from shortcut toolbar.
စင်တာကို ရွေးရင် အလယ်ကို ညှိပါမယ်။ ဘယ်၊ အလယ်၊ ညာညှိ အပြင် တပြေးညီ ညှိ (Justify) လုပ်တာကိုလည်း သင်တန်းဆရာက ပြသရပါမယ်။
To modify vertical cell alignment: Cell များကို အပေါ်အောက် ညှိခြင်း
Vertical cell alignment ဆိုတာက cell အတွင်းထဲက စာသားတွေ စာပိုဒ်တွေကို ဒေါင်လိုက်စီရာမှာ cell ထိပ်ကနေ စီရမလား၊ cell အလယ်ကောင်ကနေ စီမလား၊ cell အခြေကနေ စီလားဆိုတာ ရွေးချယ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Cell vertical alignment in the Table properties dialog box ကနေ ပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်။
ပြင်ချင်တဲ့ cell တွေကို ရွေးပါ။
Right-click and select Table properties
Table Properties ထဲက Cell vertical alignment ဆိုတာကို ဆွဲချပါ။
နှစ်သက်ရာ အထက်အောက် ညှိမှုကို ရွေးပါ။
To modify border size: ဇယား၏ ဘောင်များကို ဆိုက်ပြောင်းခြင်း
Table properties ထဲမှာပဲ Table border size ကို ဆွဲချပြီးတော့ Table ရဲ့ ဘောင်တွေကို အထူ အပါး ပြောင်းလို့ ရပါတယ်။
အောက်ပါအတိုင်း ဘောင်တွေ ထူသွားတာ တွေ့ရပါမယ်။
To change cell background color: ဇယားကွက်အတွင်း အရောင်ထည့်ခြင်း
မိမိအရောင်ပြောင်းချင်တဲ့ Cell သို့မဟုတ် Cells တွေကို ရွေးပါ။
Table Properties ထဲက Cell background color ကို ဆွဲချပြီး အရောင်ထည့်ပါ။
အခုလို အောက်ပါအတိုင်း ပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။
To modify border color: ဇယား၏ ဘောင်ကို အရောင်ပြောင်းခြင်း
Table properties ထဲက Table border color ကို ဆွဲချပြီး table ၏ ဘောင်ကို အရောင်သွင်းတာ ပြောင်းတာ လုပ်လို့ရပါတယ်။
အောက်ပါအတိုင်း အဖြူရောင် ဘော်ဒါကာလာ ပြောင်းသွားပါမယ်။
Weekly Schedule | July 11th - 16th
ဒီဇယားကို မိမိဖိုင်အဖြစ် ကော်ပီပွားပါ။ ပြီးတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်အောင် စမ်းသပ်ပါ။